जाडो याम र मानसिक स्वास्थ्य - Kailari Online
बिहिवार, ८ माघ 5:09 PM
यतिबेला जाडो मौसम छ । जाडोलाई हामी दुःखको संकेतको रुपमा पनि बुझ्छौं । यतिबेला मौसम उजाड हुन्छ । सुख्ख हावा चल्छ । वायुमण्डलको तापमान चिसिदै जान्छ । रात लामो र दिन छोटो हुन्छ । अन्नबाली, रुख बुट्यान हराभरा हुँदैन ।
यो मौसमी असर हाम्रो मानसिकतामा पर्छ । शरीरमा पर्छ ।
‘जिन्दगीको कुनै ठूलो निर्णय लिने हो, तब कहिले लिनुपर्छ ?’ शीर्षकमा बिबिसीले लेखेको छ, ‘जाडो याममा मुड खराब हुन्छ । कतिपयलाई यस मौसममा एसएसडी अर्थात सीजनल अफेक्टिभ डिसअर्डर हुन्छ ।
हाम्रो मुड र निर्णय लिने क्षमताबीच खास तालमेल छ । यदि कुनै ठूलो निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने सोच्नुहोस्, त्यो निर्णय के हो ? त्यसमा कुनै नोक्सान हुने खतरा छ ? त्यसमा सावधानी अपनाउनुपर्नेछ ? यदि त्यसो हो भने जाडोको याममै निर्णय लिन ठिक छ ।